Best a380 on rikooo? 3 afọ 3 ọnwa gara aga #522
The map ike na-egosipụta, ị akọwapụtaghị a ebe ma.
Ọ dị onye maara nke a380 i ga-enweta
Best a380 on rikooo? 3 afọ 3 ọnwa gara aga #525
Ma ọ bụghị na m nwetara ya ... Do pụtara freeware ma ọ bụ payware, nke simulator?
Freeware, enwere nanị otu-Project Airbus A380. Warekwụ ụgwọ, ọtụtụ n'ime ha ... Wilco, AFS ... enweghị ike icheta ha niile.
More ozi ga-adị mma.
Best a380 on rikooo? 3 afọ 3 ọnwa gara aga #535
ọnweghị ọ bụ Airbus ....... soro Boeing lol
Best a380 on rikooo? 3 afọ 3 ọnwa gara aga #536
Ma ọ bụ, dịka Gh0st kwuru, gaa maka Boeing 747 ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihe buru ibu.
N'ihe fọrọ nke nta ka sims niile m maara, ụgbọ elu Airbus abaghị uru ọ bụla. Abụ m onye ọkpọ nku Airbus na-anwụ anwụ kemgbe, m wee gbadata ya, naanị n'ihi nke ahụ.
M ga-abụ nwoke kachasị nwee obi ụtọ na ndụ ịhụ ụgbọ elu ndị ahụ mepụtara n'otu ụzọ ahụ dị ka Boeing, mana ... nke ahụ bụ oge dị ogologo.
Best a380 on rikooo? 3 afọ 3 ọnwa gara aga #537
you gaghị enwe ike ịgaghị aga na Queen nke Skies
Ọ nọ na mmepụta kemgbe 1970; Ọ bụ onye bụ isi njem maka Onye isi ala United States kemgbe 1986; Ọ DI mfe n'anya; ọ bụrụ na inwetara ezigbo ụkpụrụ (ndị dị ebe a na Rikoooo, Apụghị m ikwu okwu ọjọọ banyere ya, nke ahụ na-esikwa n'aka M dị ka onye ọkwọ ụgbọ ala, Ọ B NOTghị onye njikwa ihe), ọ na - eme ihe dịka nrọ;
Mkpa na m na-ekwu ihe?
Ogologo Ndụ Nwanyị ahụ! (747 nke bu heh)
Oge ike page: 0.220 sekọnd